राशिफल – Page 19 – shubhabihani
Home / राशिफल (page 19)
तपाईको आज – मिति वि.सं. २०७२ साल कात्तिक ९ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन् २०१५ अक्टोबर २६ तारिख
राशिफल – मिति वि.सं. २०७२ साल कात्तिक ९ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन् २०१५ अक्टोबर २६ तारिख
प्रयत्न गर्दा टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ। खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। धैर्यले काम लिने समय छ। छर–छिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ।
नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन होला। कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ।
आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। अरूको विश्वासमा पर्दा अन्त्यमा धोका पाइएला। केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। तापनि समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। विभिन्न अवसर जुटे पनि अरूलाई वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ।
आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। धार्मिक अनुष्ठान र मंगलमय कृत्य सम्पादन हुन सक्छन्। व्यवसायमा पनि प्रशस्तै लाभ हुनेछ। भाग्योन्नतिको समय छ।
पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन्। स्वास्थ्यमा कमजोरी र उपचारमा खर्च हुने योग छ। मुख्य काममा बाधा हुने देखिन्छ। सानातिना घरेलु काममै अल्झनुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। सवारीमा सावधानी अपनाउनुहोला। लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। पढाइलेखाइमा पनि समय दिन नसकिएला सहयोगीहरूको भरपर्दा सबै काम नबन्न सक्छन्, सजग रहनुहोला।
अलि बाध्यताका काममा जुट्नुपर्ला। केही विवादमा समेत परिने योग छ, सचेत रहनुहोस्। तापनि, दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। प्रेमको बन्धन कसिने बेला छ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। सवारी साधन उपयोग गर्दा अलि सावधानी अपनाउनुहोला।
आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्। गल्तीबिनै आरोप आइलाग्न सक्छ। सरकारी कडिकडाउको सिकार भइनेछ। थिचोमिचो गर्नेहरूले पनि सताउनेछन्। चोरी वा ठगीमा परिने समय छ। आर्थिक कारोबार गर्दा निकै नै सजगता अपनाउनुहोला। अनावश्यक दौडधुपमा समय बित्नेछ। फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ।
सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्छ, क्रियाशील रहनुहोला।
परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। सहयोगीहरूले समेत हात झिक्नाले केही अप्ठ्यारोमा परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ। पारिवारिक असमझदारीले पनि काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तापनि, मेहनत गर्दा फाइदै हुनेछ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन भने खिन्न रहनेछ।
मान–सम्मान बढ्नेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन् भने सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। राम्रै फाइदा हुने योग छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ।
परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ। परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रशंसकहरू पनि बढ्नेछन्। विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिएर जाला। कामबाट पनि सजिलै फुर्सद पाइनेछ।
आजको राशीफल ,वि.सं.२०७२ साल कार्तिक ८ गते आइतबार,२०१५ अक्टोबर २५ तारिख ,
मेष ( चु , चे , चो, ला , लि , लु , ले , लो , अ) Aries :
शरीरमा अस्वस्थता छाउनेछ,गरिरहेको काममा रोकावट
आउनाले ढिला सुस्ती हुन सकछ,आज आकस्मिक समाचारले
दुःखी बनाउला, समयमा उचित निर्णय लिन नस्कदा
व्यापार–व्यवसायमा घाटा व्यहोर्नु पर्नेछ, धैर्यता कायम हुन
नसक्दा काममा केहि खराबी देखिन सक्छ, आजको लागि
शुभ अंक ६,शुभ रंग हरियो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु
पुर्ब लक्ष्मीनारायणको दर्शन पूजा गरेर अगाडी बढे
सफलता हात लाग्नेछ ।
वृष (इ , उ , ए , ओ , वा, वि , वु , वे , वो) Taurus :
ब्यबसायमका लागि साझेदारीमा गरिएको काममा
बिशेष लाभ मिल्नेछ,ब्यापार व्यसाय फस्टाउनेछ,
बिगत लामो समय देखि रोकिएका कामहरु पुरा
गरिनेछन, तपाइले गरेको परिश्रमको आज उचित
मुल्यांकन हुनेछ,पैत्रिक सम्पत्तिबाट पनि प्रशस्ति
लाभ मिल्ने देखिन्छ,आजको लागि शुभ अंक ४,शुभ रंग
हल्का सेतो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ नमो
भगवते बासुदेबाय मन्त्रको स्मरण गरेर अगाडी बढे
सफलता हात लाग्नेछ।
मिथुन (का , कि , कु , घ , ङ , छ , के , को , हा) Taurus :
भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ
उठाउन सकिनेछ, व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुने
देखिन्छ,मातापिताको सहयोग र आशिर्बाद मिल्नेछ,
प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका पाइनेछ अरूलाई सजिलै प्रभावित
पार्न सकिनेछ, दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउनको लागि
अत्यन्त उत्तम समय रहेकोछ, आजको लागि शुभ अंक ९,शुभ
रंग सेतो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ देब्यै नम:
यो मन्त्र ९ पटक स्मरण गरेर अगाडी बढे सफलता हात
कर्कट (हि , हु , हे , हो , डा , डि , डु , डे , डो) Cancer :
गरेको काम बिग्रनाले मन खिन्न रहनेछ,आजको दिनमा लगानी
र श्रमको उचित मूल्य नपाइएला, व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा
कमजोरी आउन सक्ने देखिन्छ,अप्ठ्यारो परिस्थितिमा
गरिएको पुरुषार्थले फाइदा नै दिलाउनेछ, आश्वासन बाँड्नेहरूले
झुक्याउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला, आजको लागि शुभ अंक
३,शुभ रंग गुलाबी हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु
पुर्ब ॐ नम:शिवाय यो मन्त्र ११ पटक जप गरेर
बढे सफलता हात लाग्नेछ।
सिंह (मा , मि , मु , मे , मो , टा, टि, टु , टे) Leo :
शरीरमा आलस्यता देखिनेछ,आफ्नै कमि कमजोरीले
गर्दा आज बिबादित बनिन सकिन्छ, प्रतिस्पर्धामा
खासै सफलता हात पर्न नसक्ने देखिन्छ आफन्त तथा
नजिकका व्यक्तिहरुबाट चनाखो रहनुहोला,स्थान
परिवर्तनको सम्भाबना पनि देखिन्छआजको लागि
कन्या (टो , पा, पि , पु , ष , ण , ठ , पे , पो) Virgo :
नया कामको थालनी गरिनेछ,ब्यापार ब्यबसायमा
पनि राम्रै सफलता हात लाग्ने समय छ,साथी भाइको
सहयोग पाइनेछ,रचनात्मक काममा समय खर्चिने समय
छ,रोकिएका कामहरु पुरा हुनेछन, दुख गरे अनुरुप
सन्तोषजनक प्रातिफल पनि हात लाग्नेछ,आजको
लागि शुभ रंग हल्का रातो,शुभ अंक १ हो भने कामको
सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ गं गणपतये नमः मन्त्र जप गरेर
अगाडी बढे सफलता मिल्नेछ ।
तुला (रा , रि, रु , रे , रो , ता , ति, तु , ते) Libra :
निरन्तरको मेहनतले प्रतिस्पर्धामा जित दिलाउन
सक्नेछ,भौतिक शुख सुबिधाका साधनहरु जुट्नेछन,शत्रु पक्ष
तपाइको वशमा रहनेछ, जिद्दी गर्ने बानीले केहि
पाइएला,मनमा सद्विचार लिनेहरूका लागि समय उत्साहजनक
रहनेछ,गोपनियता राख्नुहोला, आजको लागि शुभ अंक
४,शुभ रंग हल्का सेतो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब
गणपति भगवानको दर्शन पूजा गरेर अगाडी बढे
वृश्चिक (तो , ना , नि , नु , ने , नो , या , यि , यु) Scorpio :
आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला
मिल्नेछ,व्यवसायको उन्नतिको लागि सम्झौता संगै रमाइलो
यात्रा हुन सक्छ,सवारी साधन र मेसेनेरी बस्तुको
अधिक आम्दानी हुनेछ, आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइनुका साथै
कामको उचित प्रतिफल पनि मिल्नेछ,प्रेम सम्बंध मिठास पूर्ण
रहनेछ, आजको लागि शुभ अंक ४,शुभ रंग हल्का सेतो हो
भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब कुलदेबताको दर्शन पूजा
गरेर अगाडी बढे सफलता हात लाग्नेछ।
धनु (ये , यो , भा , भि , भु , धा , फा , ढा , भे) Sagittarius :
पारिवारिक असमझदारी बढ्नेछ,मान्यजनको सुझाब
सल्लाह आज अप्रिय लाग्नेछ,सामाजिक र जनता संग
प्रतक्ष सरोकार राख्ने काममा फाइदा
मिल्नेछ,माताको स्वास्थ्यामा कमजोरी देखिन
सक्छ,कृषि तथा जग्गा जमिनको क्षेत्रमा राम्रै
प्रतिफल हात लाग्नेछ,आजको लागि शुभ अंक ५,शुभ रंग
खैरो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ सों सोमाय
नमः मन्त्रको उच्चारण गरेर अगाडी बढे सफलता हात लाग्नेछ।
मकर (भो , जा ,जि ,खि, खु ,खे ,खो, गा, गि) Capricorn:
काममा असफलता हात लाग्न सक्छ,ब्यबसायिक
पाटोमा सामान्य रोकावट आउन सक्ने देखिन्छ,
बोलीको प्राभाब आज कमजोर हुनेछ भने आर्थिक
अबस्था खस्कन सक्ने देखिन्छ,आत्म-सम्मानमा चोट
पुग्न सक्छ,यात्रा पनि कष्टकरपूर्ण हुन सक्ने
देखिन्छ,आजको लागि शुभ अंक ५,शुभ रंग खैरो हो
भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ ईष्टदेबको दर्शन पूजा
गरेर अगाडी बढे शुभ फल हात लाग्नेछ।
कुम्भ (गु , गे , गो , सा , सि , सु , से , सो , दा) Aquarius :
स्वास्थ्यमा कमजोरी आउन सक्नेछ, अरुको कर बल र
बाध्यतामा गरिएको काममै समय बित्न सक्छ, आशा
देखाउनेहरूबाटै धोका पाइएला,व्यावसायिक काममा खर्च
बढ्नेछ,अरूका काममा महत्वपूर्ण समय खर्चिनु पर्ने हुन सक्छ,
आथिक कारोबार कमजोर रहनेछ, आजको लागि शुभ अंक
४,शुभ रंग निलो हो भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु
पुर्ब ॐ के.केतवे नम: यो मन्त्र जपेर अगाडी बढे
मीन (दि , दु , थ , झ , ञ , दे , दो , चा , चि) Pisces :
आत्मबल दरिलो बन्ने समय छ,विशिष्ट व्यक्तित्व
संगको भेटघाट फलदायी बन्नेछ,मन परेका बस्तु कपडा
अलंकार जस्ता चिजहरु हात लाग्नेछन,मिष्ठान्न
भोजन गर्ने सु अवसर मिल्नेछ, रोकिएका कामहरु
बन्नेछन् भने स्वास्थ्यमा केहि समस्या आउन
सक्छ,आजको लागि शुभ अंक ३,शुभ रंग गुलाबी हो
भने,कुनै काम सुरुवात गर्नु पुर्ब ॐ नम:शिवाय यो मन्त्र
११ पटक जप गरेर अगाडी बढे सफलता हात लाग्नेछ।
© ज्योतिषाचार्य पं . वासुदेव अधिकारी
श्री दुर्गा ज्योतिष सेवा केन्द्र